The 30-n'efu ụbọchị ikpe Clickfunnels bu àjà ngwaahịa nke a flash ire.
Ọ bụ a ụzọ na-akwalite ọrụ ha nke na-mepụtara na dị iche iche ọrụ nke na-enye onye ọ bụla a ohere na-ewu ha web ọnụnọ na ha okwu.
Inweta na-enye nke 30 ụbọchị ikpe ga-emeghe ọnụ ụzọ zuru web mba, Ịdọrọ na idobe ọdịda page-ewu ụlọ, mobile anabata peeji nke, a nnukwu collection of ndebiri ịhọrọ site na, A / B gbawara n'etiti ule, onye-click upsells, payment nhazi, otu funnels chụpụrụ site njikọ aka na akaụntụ netwọk mmekọrịta, nakwa dị ka webinar funnels.
nke ahụ bụ $97 uru nke ọrụ maka free!
Bịa na-esi gị akwụkwọ nke Clickfunnels ugbu a Ebe a
P.S. Nke a bụ a otu oge enye maka 14 ụbọchị ikpe…
Ya mere, nweta a babysitter, were na-arụ ọrụ anya na-eme ka n'aka na ị na-atụ uche nke a pụrụ iche otu oge na-enye.
njehie: Content is protected !!